Maxay yihiin siyaabaha lagu heli karo dib-u-celin heer sare ah ee PR-ka ah blogs?
Commentluv blog waa hab sax ah ee helitaanka tayada sare ee PR ee dib u habeyn ah oo badanaa laga tirtiro shaqaalahayga websaydhka. Mawduucani had iyo jeer waa iska hor imanayaa si looga wada hadlo. Commentluv blogs ayaa bixinaya faa'iidooyinkooda mulkiilayaasha boggaga marka ay ku caawiyaan dhisidda xiriiro awood leh sida ay kuugu soo celinayaan link oo tilmaamaya mid ka mid ah qoraalladaada blogka.
Qodobkan, waxaan ka wada hadli doonaa siyaabo muhiim ah sida loo dhiso dib-u-celin heer sare ah PR.
Aan horay u falanqayno waxa ku saabsan blogs-yada iyo meelaha laga helo. Noocyada noocaan oo kale ah ayaa kuu oggolaanaya in aad dib u xirto mid ka mid ah boggagaaga blog-kaaga oo aad u gudbisid casabiga tayada leh ee bogagga shabakadda. Inta badan webmasters waxay ku andacoodaan in backlinks ay leeyihiin qiimo badan oo loogu talagalay kaamilada shabakadaha inta aan ka yareyn kuwa. Hase yeeshee, labadaba noocyada noocaas ah waxay leeyihiin faa'iidooyinkooda si ay u helaan gaadiidka dabiiciga ah. Si loo abuuro xiriir tayo oo tayo leh, waxaad ubaahan tahay inaad abuurto labadaba dofollow iyo nofollow backlinks. Sida caadiga ah, dib-u-qabsashada nofollow ee goobaha PR ayaa sababaya dib-u-celin cusub oo dib-u-dajin ah oo kor loo qaado socodka gaadiidka websaydhka. Haddii aad dib-u-qabasho ku sameyso blogs-kaaga ama bogaggaaga, waa inaad maskaxda ku haysaa in dib-u-habeyn lagu sameyn doono istaraatijiyad fiican oo la-is-daba-tago iyadoo ay hagaajinayso aragtidaada blogga.
Waxaan jeclahay fikradda Neil Patel ee dhismaha xiriirka. Wuxuu ogaaday fikradda ah dhisidda isku xirnaanta habka la iskudhin karo. Habkani wuxuu ku siinayaa fursad aad ku dabagaliso waxqabadkaaga oo aad qaadato talaabo suurtagal ah inta aan qorsheeynin uusan shaqayn.
Dikumintiyada bogga bulshada
Iyadoo ay sabab u tahay isbedelada Google ee isbeddelka algorithm, intooda badan bloggers ayaa go'aaminaya inay isku xiraan nofollow si ay u eegaan shakiga makiinada search. Si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah blogs commentluv ayaa weli la heli karaa waxayna bixiyaan milkiilayaasha bogagga leh dib-u-tayo sare leh.
Guud ahaan, blog posting waa hab sahlan oo lagu abuuro backlinks. Nidaamkan waxaa hubiyey dad badan oo ku guuleysta websaydhka, iyo haddii si sax ah loo sameeyo, waxay keenaysaa natiijooyin wanaagsan oo ku saabsan gaadiidka, darajooyinka, iyo beddelidda. Waxaad ubaahan tahay inaad dhisato isku xirnaansho ahaan dhexdhexaadin dhisme xiriir. Ugu horreyn, kuma siin doono waxtarrada. Si kastaba ha noqotee, muddada dheer, waxaad awood u yeelan doontaa inaad ku dhisto awood iyo kor u qaado taraafikada boggaaga.
Qaar ka mid ah bloggers ayaa xadiday tirada faallooyinka ee maqaal kasta. Waxay u oggolaanayaan in ay abuuraan dib u qabasho dofollow oo keliya oo ah faallooyinka ugu horreeya. Agaasimaha blogga shaqsi ahaan ayaa go'aaminaya in uu ku ansixiyo dib-u-celin dhab ah ama haddii kale. Haddii ay dareemaan falalka spammy qaar ka socda goobtaada, waxay u badan tahay inay mamnuucayaan inaad dib u dhigto dib u celinta boggooda. Si kastaba ha noqotee, haddii ay helayaan faallooyinkaaga dabiiciga ah iyo munaasabada mawduuca laga wada hadlayo, waxay ku siin doonaan dib u celin dhab ah mar kasta oo aad faallo ka bixiso bloggooda.
Talooyin lagu abuurayo dib u qaabeyn dib u eegis ah Comments on blogs
Ugu horreyntii, isku day inaadan fiirin spamka. Si aad u abuurto sumcad fiican blog, waxaad u baahan tahay inaad ka tagto faallooyin tayo leh oo faa'iido leh. Hubso inaad si taxadar leh u akhrido maqaal iyo faham mawduuca. Haddii kale, waxaad ku qori doontaa faallooyin aanad ku dhajin dhibta oo aad u eegto curyaanimada. Waxaa intaa dheer, xitaa ha isku dayin inaad ku xayeysiiso ganacsigaaga internetka markaad faallo ka bixinaysid maqaallo aan ku haboonayn ganacsigaaga. Waxaa lagaa saari doonaa taas oo aan marnaba heli doonin fursad aad ku hesho dib u celin dhab ah ee boggan. Waa inaad isku daydid inaadan dib ugu laaban xariirka dib-u-dhiska maxaa yeelay waxay u egtahay mid aan caadi aheyn iyo spamka. Intaa waxaa dheer, waxaan kugula talinayaa inaad ka fogaato hal iyo labo faallooyin Source .